Ahoana ny handrohana zaza vao teraka vao voalohany ao an-trano, amin'ny firy ny hafanana, inona matetika no atao?
Ahoana ny handroa zaza vao teraka ary inona no tokony hohadinoina mandritra ny fizotry ny rano voalohany?
Ny ray aman-dreny tanora manoloana ny fisehoan'ny lahimatoa dia miatrika fahasarotana vaovao, ny tsy firaharahiana ireo sombintsombin'ny fikarakarana ny zazakely, izay marefo sy tsy afa-manoatra. Ny iray amin'ireo olana voalohany dia mifandraika amin'ny fomba fandroahana zaza vao teraka. Ity fampahalalana manaraka ity dia hanampy anao hametraka ny fitsipika amin'io fomba fiasa manan-danja io.
Rahoviana vao afaka manasa zaza vao teraka aho?
Mba hikojakojana ny fahasalaman'ny zaza dia takiana amin'ny andro voalohany aorian'ny fisehony izany mba hifikirana amin'ny fenitra fidiovana, ny iray amin'ireo zavatra ireo dia ny fanatanterahana ny fizotry ny rano. Ny fandinihana zazakely iray feno rano ao anaty rano, maro amin'ireo zaza tsy ampy taona no manoro fahazoan-dàlana aloha fa tsy manasitrana ny ratra an-jambany (rehefa mipoitra ny sokatra) - ny herinandro faharoa na fahatelo amin'ny fiainana.
Hatramin'io fotoana io dia tsara kokoa ny mampiasa bain-kely ary manasa ny zaza, miezaka ny tsy handratra ny faritra misy ny tampoka tsy nahalevona (mba hisorohana ny aretina). Azonao ampiasaina hanadiovana ny hoditra amin'ny lamba malefaka malefaka, ahazoana rano amin'ny dibera na sponge na manasa ny zaza eo ambany rano mangatsiaka rehefa avy nofoanana. Raha misy olana ara-pahasalamana ao an-kibony, dia mety hofoanana ny fanombohana ny fandroana. Amin'izany, tokony hifantina dokotera na neônatôlôgy ianao.
Fiomanana amin'ny fandroana zaza vao teraka
Ny fandroana voalohany ny zazakely dia iray amin'ireo hetsika mahavariana indrindra sy tompon'andraikitra, izay mety hiankina amin'ny fanatsarana ny sombin-tsakafo ho an'ny fikarakarana rano ary ny fanirian'ny ray aman-dreny hanatanteraka an'io "fombafomba" be dia be io, isaky ny manasa azy io. Ho an'ny fampihetseham-po sy azo antoka dia tokony ho eritreretina sy homanina mialoha avokoa ny zava-drehetra.
Azo alamina ao anaty efitrano na ao an-dakozia ny fandroana na ny ao amin'ny efitrano fatoriana ao anaty dobo feno rano. Ny safidy farany dia azo ekena kokoa noho ireo roa voalohany, satria Ny penina dia hanana toerana malalaka kokoa amin'ny hetsika mavitrika ary ny rano dia hitazona ny hafanana maharitra. Tokony ho fantatsika fa ny fandroana ao anaty fandroana lehibe dia tsy misasa fotsiny, fa fepetra iray izay manome izao manaraka izao:
fanamafisana ny vatan'ny zaza;
fisorohana aretina isan-karazany (indrindra ny dermatological and allergic);
Fanadiovana ny rivotra vovoka amin'ny fampitomboana ny asan'ny ratra;
fitondrana ara-batana, manatsara ny fivoaran'ny zaza;
fomba iray hafa ahafantarana ny zaza manerana izao tontolo izao;
fanatsarana ny fiankohofana;
ny fanesorana ny adin-tsaina ara-tsaina, tony, fanitsiana ny torimaso tsara.
Ny fandroana dia karazana enta-mavesatra eo amin'ny vatana. Tsara kokoa ny mialoha ny fikarakarana kely, mampametram-panamboarana (mikotrika, manasitrana) ary manamboatra gymnastics (fikolokoloana ny kofehy). Ny fampiofanana toy izany, izay mitaky 20 minitra eo ho eo, dia hampatanjaka ny tombontsoa amin'ny fomba fitsaboana rano. Eny, raha manao izany ny iray amin'ireo ray aman-dreny, ary ny faharoa dia manomana izay ilaina rehetra ao amin'ny efitra fandroana.
Inona no ilainao handroana zaza vao teraka - lisitra
Ny filomanosana ny zazakely ao anaty fandroana lehibe, tokony hikarakara ny fitetezana ny rano sy ny rivotra ao amin'ny toeram-pisakafoana, ny fahadiovan'ny bata, ny fahafahan'ny fitaovana isan-karazany hanamorana sy hanatsarana ny fampiononana amin'ny fomba fitsaboana, ny fitsaboana amin'ny ankizy. Ilaina ny manasa tanana ary esory daholo ny firavaka rehetra mba tsy hikorontana ny zaza. Isavanay ny lisitr'ireo zavatra tena ilaina amin'ny fikarakarana:
jiro mivalona ao amin'ny efitrano fandroana - mba hisorohana ny mianjera amin'ny tany ambany rihana miaraka amin'ny zazakely eo am-pelatanana;
toerana - hipetraka ny ray aman-dreny;
fanavaozana latabatra - amin'ny famenoana sy fanovozana fitafiana aorian'ny fandroana;
thermomètre ho an'ny rano sy rivotra;
ora ho fanaraha-maso ny fotoana lanin'ny ankizy ao anaty rano;
fitaovana ahafahana mitazona ny lohan'ny zaza eo amin'ny rano tsy misy ny fanohanan'ny ray aman-dreny - kapa misy plastika vita amin'ny plastika, onjam-pandrefesana, fitohanana sy ny toy izany;
kitapo malefaka na tavy fanadiovana;
fanangonana rano madio - mba hosotroina ilay zaza;
volondasina volon-davenona hanadiovana ny sofina;
Accessories ho an'ny fikarakarana hoditra (crème, poids, oils);
fitafiana ho an'ny ankizy.
Inona no tokony hanasa ny fandroana alohan'ny handroahana zazakely?
Isaky ny alohan'ny handroana zaza vao teraka, dia tokony hadio tanteraka ny bao. Avy eo dia manontany ny fanontaniana hoe: inona no tokony hosasana alohan'ny fandroana zaza? Azo antoka fa ny fampiasana soda mahazatra sy ny sponge amin'ny sarotra mafy. Ny fanesorana ny rindrina sy ny ambany dia tokony hosasana tsara ny rano amin'ny rano avy amin'ny rano. Ankoatra izany, afaka ampiasaina ho savona fanasan-damba voajanahary ianao. Raha resaka mikasika ny fomba handroanana zaza vao teraka ao anaty bata izany, dia tsy ilaina ny manasa izany alohan'ny fomba fitsaboana tsirairay, amin'ny filazana fa tsy ampiasaina amin'ny tanjona hafa.
Tokony handrobona rano ve aho amin'ny fandroana zaza vao teraka?
Betsaka ny ray aman-dreny liana raha mila rano amin'ny fandroana zaza vao teraka. Inoana fa ny ankizy, izay efa nanasitrana ny ratra tamin'ny elatra, dia afaka mandro amin'ny rano mahazatra. Ny fampiasana rano ampiasaina dia tsy misy afa-tsy amin'izao fotoana izao. Raha misy fisalasalana mikasika ny kalitaon'ny rano fisotro dia tsara kokoa ny mampiasa sivana mba hanadiovana sy hanesorana izany.
Toby ao amin'ny efitrano fandroana zaza vao teraka
Ny fiheverana fa ny rivotra ao amin'ny efitrano fandroana ny zazakely dia tokony ho mafana kokoa noho ny ao amin'ny efitrano hafa, dia diso. Matahotra ny hatsiaka ny ray aman-dreny maro, ka tsy mieritreritra fa ny zaza vao teraka dia mety hiteraka hitera-doza, fa koa tsy voatery mandresy, satria vokatry ny tsy fahalavorariana amin'ny rafi-pandrefesana. Raha mieritreritra ny hafanana tokony hampandroina ny zaza vao teraka dia ilaina ny mandinika ny fitsipika ankapoben'ny lamin'ny rivotra izay atrehin'ny ankizy ao an-trano.
Ny hafanan'ny rivotra tsara indrindra ho an'ny zazakely dia tokony ho eo anelanelan'ny 18-22 ° C. Raha ny fandinihana izany dia tsy ilaina ny manafatra ny fialana manokana. Ankoatr'izay, taorian'ny nandaozan'ny toeram-pisakafoana, dia tsy nisy fiovana tampoka teo amin'ny rivotry ny rivotra, izay manimba ny vatana, ny varavarana dia tokony havela malalaka mandritra ny fandroana.
Ny hafanana rano ho an'ny zazakely
Ny olana manokana iray izay manentana ireo ray aman-dreny be fiahiana, tsy misy fiantraikany, dia mahakasika ny hafanana izay tokony handroana zaza vao teraka. Amin'ity tranga ity dia ilaina ihany koa ny mitadidy fa tsy mitovy amin'ny an'ny olon-dehibe ny fifehezana ny hafanan'ny vatan'ny zaza eo amin'ny zaza. Noho izany, mieritreritra ny amin'ny karazana rano tokony handrohana zaza vao teraka dia tokony ho tarihin'ny fihetseham-pony manokana, fa amin'ny toetry ny vatolampy. Nahazo aina ilay zaza, ary nahasoa ny fitsaboana, ny rano ao anaty bandro dia tokony hifanaraka amin'ny fatran'ny 33-34 ° C.
Ny bata voalohany amin'ny bata lehibe dia tokony ho tanterahana amin'ny 34 ° C Aorian'ny herinandro, mila kelikely ianao - iray isa - hampidina ny mari-pana, ary ahemao tsikelikely hatrany isan-kerinandro amin'ny faran'ny 29-30 ° C. Ao anatin'izany toe-javatra izany, ny zaza, mandro sy mivezivezy ao anaty rano, dia mihalevona: mitombo ny tahan'ny fony, mihamatanjaka ny rà, ny fizotran'ny metabolika ao amin'ny vatana dia mihamidina. Tsara ny manamarika fa amin'ny hoavy, mandritra ny enim-bolana dia afaka mandro ao anaty rano 26-27 ° C ilay zaza, izay hahatsapany fa tsara.
Inona no tokony handroana zaza vao teraka?
Zava-dehibe iray hafa ho an'ny ray aman-dreny izay te hahafantatra ny fomba handroanana zazakely vao teraka dia ny fampiasana ny fandroana. Ao amin'ny zazakely, ny tsimokaretin'ny hoditra dia tsy misy dikany (amin'ny tsy fisian'ny hafanam-po), ka amin'ny herinandro roa voalohany dia tsy azo ampiasaina amin'ny fanadiovana mihitsy. Tsy mihoatra ny 2-3 in-dray mandeha isan-kerinandro ianao afaka mampiasa savony an-tsokosoko (foam, gel ary ny toy izany) ary indray mandeha isaky ny 1-2 herinandro - shampoo zazakely.
Araka ny hevitry ny maoderina, tsy misy zavatra tokony hifangaro amin'ny rano. Ny tena mahavariana dia ny fahazoan-dàlana, izay tian'ny reninay sy ny renibeny manampy rehefa mandroaka zaza. Tsy dia misy vokany amin'ny fiterahana io vovobony io, amin'ny voka-dratsiny, ary ny vahaolana marefo kokoa dia manenina ny hoditra ary mety hitera-doza ny hoditra moka.
Azo avaozina in-droa isan-kerinandro ny fampiasana herisetra amin'ny fandroana zaza, ka mahatonga azy ireo hozatra. Mety tsara toy ny fihodinam-bolo, rameva, kalendula, motherwort, hop-kes, lavender. Ho an'ny fandroana lehibe iray dia mila fitahirizana akora miorina ianao, izay tokony ho feno ranom-boina ary rehefa misotro rano mandritra ny 3 ora farafahakeliny, dia mihodina. Tsara ho marihina fa amin'ny herisetra dia mila mitandrina ianao, satria afaka miteraka fanehoan-kevitra tsy mety amin'ny zaza izy ireo.
Ahoana no handroahana zazakely vao teraka voalohany?
Ireto torolàlana manaraka ireto dia hanampy ireo ray aman-dreny vao vita hahafantatra ny fomba fandroahana zaza vao teraka vao voalohany:
Ny fotoana tsara indrindra handrobohana - ny takariva, alohan'ny sakafo farany sy ny alina.
Tsy maintsy atao ny dingana raha tsy efa voaomana ny fiomanana rehetra ilaina.
Tokony ho feno 2/3 ny bata.
Alohan'ny handroana zaza vao teraka ao anaty bandro, mila manadio ny génitale amin'ny napkin.
Ampidino tsikelikely ilay zazakely ao anaty rano: voalohany ny tongotra, avy eo ny valabavim-bary, ny volo, ny tratra, ny soroka, raha tokony hijanona eo ambonin'ny rano ny tendany sy ny lohany.
Ho an'ity zazalahy kely ity dia tsy atahorana izany, ny soso-kevitra ny hiresaka tsy tapaka aminy amin'ny feo malefaka sy malefaka, mitsiky.
Ahoana ny fomba hitazonana ny zazakely rehefa milomano?
Rehefa mandinika ny fomba handroanana zaza vao teraka dia tsy afaka manadino ny fanontaniana mikasika ny fomba hikojakojana azy ao anaty rano. Tsara ny mihazona ilay zaza miaraka amin'ny tanany havia - rantsantanana efatra eo an-damosin-doha sy rantsantanana kely eo ambanin'ny vozony, manamarina fa ny vava sy ny orona dia ambonin'ny rano, ary ny faharoa kosa manitsy ny toerana misy ny kofehy. Mitazona azy io toy izany, tokony hitarika ny kofehy avy amin'ny tendrony iray amin'ny fandroana amin'ny iray hafa. Ny zazakely dia mitsaingoka amin'ny tavy, tokony hitodika izany ianao ary hitazona izany mba hahitana ny raozy eo amin'ireo rantsana lehibe sy index.
Azo atao ve ny mandrotsaka ny sofinao rehefa mandroa zazakely?
Ny zaza miala sasatra, izay mihamatanjaka be ao anaty fandroana, dia sarotra ny manao raha tsy mahazo rano amin'ny sofina. Mandritra izany fotoana izany, tsy misy zavatra mahatsiravina amin'izany, ary tsy tokony hatahotra ny fifandraisana matetika amin'ny sofina amin'ny rano. Ny rano hianjady dia hanampy amin'ny fanalefahana sy hanesorana ny solfana azo avy amin'ny lakandran-tsofina. Tsara ny manamarika fa tsy manimba ny rano eo amin'ny maso izany.
Ohatrinona ny mandroa ny zaza vao teraka?
Tsy azo takarina ho an'ny vao manomboka ny fotoana handroahana ny zaza vao teraka. Voalohany aloha dia tsara ny manome ny paikady mandritra ny 7-10 minitra, mba hahafahan'ilay zazakely mifanakaiky amin'ny rano, dia nanomboka nampiasaina. Ny ampitson'io, dia mety hitombo ny fotoana fandroana an'ilay zazakely, ka miteraka tsikelikely hatramin'ny 20-30 minitra. Arakaraky ny halavan'ilay zazakely, ny tsara kokoa ho azy sy ny ray aman-dreny: aorian'izany asa izany dia ho noana sy ho reraka izy, ka ho feno tanteraka ny hatory.
Impiry aho no tokony handroaka zazakely vao teraka?
Ny ray aman-dreny sasany dia misalasala ny mandroa zaza vao teraka isan'andro na manao fitiliana rano tsy tapaka - ohatra, isan'andro. Manoro hevitra ny dokotera hanome fotoana handroana isan'andro izay tena zava-dehibe amin'ny vatan'ny ankizy. Izany dia manampy amin'ny fampivelarana ny taolam-paty sy ny hozatra, manatsara ny fitiliana ny rà, manampy amin'ny fikolokoloana haingana ny hetsika, mametaka ny rantsantanana sy ny penina.
Inona no tokony hataoko aorian'ny fandroana zaza vao teraka?
Zava-dehibe ny tsy mahafantatra ny fomba handroanana zaza vao teraka, fa koa ny fomba hamitana ny fomba fitsaboana, ny tokony hatao manaraka. Ny safidy tsara indrindra - manasà rano madio, mametafeta amin'ny lamba ary manamboara azy, hamelona ny tratran'ny reny na ny fifangaroany ary hametraka azy ao am-pandriana. Matetika no matory ny zazakely. Raha mitomany ny zazakely dia aorian'ny fotoana tokony hiezahanao hanova zavatra amin'ny fomba fitsaboana: ny fotoana fampiharana (ohatra ny adiny iray aorian'ny sakafo), ny mari-pahaizana rano (somary mafana kokoa), ny toeran'ny zaza ao anaty rano. Ampiasao ny fomba fanandramana, azonao alaina ny zavatra hataon'ny zazakely.
Rehefa tsy afaka mandroa zaza ianao?
Ny zaza mandro ao anaty bata sy ao anaty lavadrano lehibe dia tokony havotsotra toy izany:
amin'ny andro fitsaboana ;
amin'ny aretina miaraka amin'ny tazo;
Ilay reraka dia reraka sy maivana.
Ohatrinona ny tazan'ilay zazakely ao anatin'ny 3 volana?
Ny zaza tsy ampy taona - fampandrosoana
Toe-poatin'ny tovovavy vao teraka
Sakafo ho an'ny zaza iray ao anatin'ny 6 volana
Sakafom-borona ho an'ny zaza vao teraka
Ao amin'ny tratra iray dia tsy ampy ny ronono - inona no tokony hatao?
Xenia Deli sy Justin Bieber
Miakanjo miaraka amin'ny flounces
Loko lokom-po amin'ny blondes
Ahoana no handoavana lanja aorian'ny 50 taona?
Pearl Gourami - fitsipika fototra momba ny fikarakarana sy ny votoaty
Ny vadin'ny vadin'i Charlie Sheen taloha dia nampidirina hopitaly mba hanombanana ny toe-tsainy
Nahoana no zoma ny andro faha-13 voaozona?
Afangaro amin'ny bronchitis
Zamiokulkas - fikarakarana